KUURIYAD WAQOOYI OO MAR KALE TIJAABISAY GANTAALO | Dayniile.com
Home Warkii KUURIYAD WAQOOYI OO MAR KALE TIJAABISAY GANTAALO
Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmiya u xaqiijisay, in taliska Pyongyang uu tijaabisay gantaal baalistik ah oo laga tuuray gujis. Tijaabadaas ayay khubarradu ku tilmaameen in Kuuriyada Waqooyi ay ka damacsantahay in ay si deg deg ah u howlgeliso gujisyada xambaaro gantaallada.
Warka kasoo baxay Warbaahinta Xukuumadda Pyongyan ayaa yimid, maalin kaddib marki ay Kuuriyada Koofureed sheegtay,in ay rumeysantahay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal laga tuuray gujis yaalla xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi.
Dowladda Mareykanka ayaa ku boorrisay Kuuriyada Waqooyi in ay joojiso daan-daansiga. Afhayeenka Aqalka Cad, Jen Psaki ayaa Talaadadi shalay sheegtay, in Dowladda Mareykanka ay u furantahay in ay wadahadallo diblamaasiyadeed kala gasho Kuuriyada Waqooyi, barnaamijkeeda Niyukleerka.
Previous articleCiidamada Millateriga oo Howlgal ka sameeyay Shabeellaha Hoose
Next articleDowladda Soomaaliya oo Madaxda IMF u faah faahisay kasoo kabashada saameynta dhaqaale ee COVID-19
The author of the Old School New Body reviews has a background in fitness and has published multiple books on the subject. He has...
Boqor Buurmadow oo raali gelin iyo fasiraad ka bixiyey hadalkii muranka...